TCDD 262 amin'ny fanendrena olona | RayHaber
HomeANKAPOBENYVaovao manokanaNy TCDD dia hanendry olona 262 personnel
07 / 11 / 2019 Vaovao manokana, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, RAFITRA, Levent Özen, Headline, TORKIA, TCDD, TCDD Transportation Co., mpanoratra
Fanendrena olona TCDD
TCDD 262 Fisoratana ho an'ny olona: nisokatra ny toeran'ny mpiasan'ny TCDD ary nambara tamin'ny 5.November.2019 ny fizaran'ny mpiasa. Tamin'ny fanapahan-kevitra nivoaka tao amin'ny Gazetim-panjakana Gazette State tsy mihetsika 262 ireo mpiasa tafiditra.
Toy izao manaraka izao ny fanapahan-kevitra nivoaka tao amin'ny Gazety ofisialy ankehitriny; Raha ny orinasam-panjakana sy ny orinasam-panjakana, ny varotra izay voalaza etsy ambony dia atao ao anatin'ny lalam-panjakan'ny Lalàna laharana 399.
Amin’ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena dia fanafoanana sy fanavaozana ny toeran’ireo mpiasa amina mpiasa sy ireo toeran’ireo mpiasa voatondro sy ireo toerana ary toerana noforonin ireo mpiasam-panjakana eo ambany lalàna 657 no.
TCDD SPECIALISY STAFF
Ao anatin'ilay fanambarana navoaka, noforonina ny TCDD, Central ary Providence, Chief Chief, Inspector, Consultant, Office, Service Manager, Manager, Chief Expert, Wagon Technician, Chief technician, YHT Mechanic and Psychologist staff.
Latabatra fanendrena mpiasa an'ny TCDD
TCDD foibe Chief Expert 28
TCDD foibe mpanara-maso 1
TCDD foibe mpanolotsaina 10
TCDD foibe manamboninahitra 26
TCDD faritany Service Manager 3
TCDD faritany tale 15
TCDD faritany Chief Expert 19
TCDD faritany Wagon Technician 120
TCDD faritany Chief teknisianina 18
TCDD faritany YHT Engineer 20
TCDD faritany psikology 2
INONA NO FANAHORANA?
Ny fananganana dia midika fisarahana amin'ny mpiasa. Amina mpiasa dia nomena mpiasa. Ny fampahalalana momba ny fandraisana mpiasa vaovao sy ny fanendrena anatiny dia tsy voafaritra ary efa natao ny fanapahan-kevitra.
Mikasika ny fanambarana ny fanapahan-kevitry ny Filoham-pirenena 2019 / 373 izay navoaka tao amin'ny gazety ofisialy CLICK HERE
Izzmir Target Expanded, Rail System Network dia hitombo ho amin'ny 262 Km
Ilay mpiandraikitra notendrena tao amin'ny TCDD tamin'ny lalàna dia nametraka 2828…
Fanendrena KPSS 2017 / 2 amin'ny TCDD Taşımacılık A.Ş.
Valin'ny KPSS 2017 / 2 ın
TCDD KPSS 2017 / 2 Adidy araka ny valim-pifidianana…
TCDD Başuzman Alımı
Famerenana ny injeniera TCDD
TCDD ny fandraisana mpiasa
TCDD YHT Makinisti Alımı
Androany amin'ny tantara: 7 Novambra 1918 Adidy miaramila amin'ny lalamby